चाँडै उद्धार नगरे, अब बाँच्ने कसरी भन्ने प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ
हाम्रो मित्ररास्ट भारतमा आजको मितिसम्म नेपालीहरु कति छन् भन्ने तथ्याङ्क नेपाल सरकारसँग छैन भने प्रवास भारतमा रहेका नेपालीहरुको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट के पहल हुँदैछ ? प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।
विश्वमा अहिले कोरोना भाइरसको अभुतपूर्व महासंकट आएको बेला भारतमा आजको मितिसम्म एक लाख भन्दा माथी संक्रमण बढेको छ भने तिन हजार भन्दामाथी मृत्युको संख्या बढीरहेको छ । कोरोना भाइरस दिनप्रतिदिन झन बढ्दै गइरहेको छ । भारतमा बिकराल रुप लिने निश्चित भैसकेको छ । भारतको केन्द्र सरकारले आफ्ना हरेक राज्य सरकारसँग समुन्यय गरि आ–आफ्नो राज्यमा जाने मजदुर विद्यार्थी नागरिकहरुको लागि विशेष रेल बसको व्यवस्थापन गरि करिब ५० प्रतिशत सफल भैसकेको अवस्था छ । आवश्यक अनुसार विभिन्न पर प्रान्तिय मजदुरहरु आ–आफ्नो राज्यमा गाउँघर जाँदै छन् । यति सुविधाको बावजुद् मजदुरहरु रातदिन हिडेर यात्रा गर्न बाध्य भएका छन् । कतिको त मृत्यु हुने गरेको छ यात्राकै समयमा भारतमा पुरै कलकारखाना व्यवसाय उद्योगधन्दा बन्द भएका छन् । यहाँ मजदुरहरुले ३ महिना देखि तलव पाइरहेका छैनन् । यो दुई महिना देखि कसरी आफ्नो दिनचर्या काटिरहेका छन, मजदुरहरुले विद्यार्थीहरुले त्यो हामिलाई थाह छ । नेपाली मजदुरहरुलाई नेपाली विद्यार्थीहरुलाई खाने, बस्ने र स्वास्थ्य उपचारको लागि यताको स्थानीय प्रशासन सरकार र नेपाली संघसस्थासँग समन्वय र सहयोग गरि केही दिनसम्मको लागि त हाम्रो सम्पर्कमा आएका मजदुरहरुको लागि खाने बस्ने व्यवस्थापन गर्न सफल भएका थियौं ।
हामीले भारतस्थित सामाजिक संगठन अखिल भारत नेपाली एकता मंच र प्रवासी नेपाली संघको तर्फबाट भारतभरी प्रत्येक राज्य भित्रका जिम्मेवार साथीहरूका सम्पर्क नम्बर सार्वजनिक गरिसकेपछि भारतमा विभिन्न संघसस्थाहरुसँग समन्वय गरि अलपत्र नेपाली मजदुरको लागि केही हदसम्म राहत उपलब्ध गराउने काम गर्यौ । भारतस्थित नेपाली राजदूतावासमा सम्पर्क गर्दा सम्पर्क नै नहुने भएपछि राजदूतावासको काम संघसस्थाहरुले गर्न थालेका छन् । दिल्लीमा एकता मंचका केन्द्रिय सचिव आरबी खड्का सरको विशेष भूमिकामा र र मुम्बईमा एकता मंचकै केन्द्रिय सचिव मोहन देवकर सरको विशेष सहयोगमा अलपत्र परेका नेपालीहरु उद्दार गर्न सफल भएका छौँ । तर अवस्था दिन प्रतिदिन बिकराल रुप लिँदै आएको अवस्थामा कतिपय नेपालीहरु मुम्बई, दिल्ली देखि हिडेर नै नेपाल जान्छौ भनेर हिडेकाहरु पनि अलपत्र परेको खबर भारतीय सन्चार माध्यमबाट थाहा पाएपछि सन्दिप राना सर आरबि खडका सर र अनेरास्ववियु भारतका केन्द्रिय सदस्य सुधन महत जि र नेपाली विद्यार्थी संघ भारतका केन्द्रिय अध्यक्ष अम्बिका जोसि लगायतको समन्वयमा धेरै समस्या हल गर्न सफल भएका थियौ ।
त्यसैगरी भारतमा रहेका नेपाली संघसस्थाहरुले गर्न सक्ने सहयोग पहल गरिरहेकै छन् तर अब हाम्रो पहल सहयोग कुनै काम न लाग्ने अवस्था आइसकेको छ ।
मात्र अब बाँच्ने कसरी ? भन्ने प्रमुख प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । अहिलेसम्म विभिन्न संघसस्थाको सहयोग र स्थानीय सरकारको माध्यमबाट बाँचिरहेका थिए । यतिसम्मको दर्दनाक हुँदा पनि प्रवासी नेपालीहरु संयमित भएर अनुशासनमा बसेका थिए । आफ्नो देशको सरकारले उद्दार गर्छ भन्ने प्रतीक्षामा छन् । यो भनेको आफ्नो देशप्रतिको जिम्मेवारी हो भन्ने ठानेर नै बसेका छन् । कोरोना भाइरस नेपालका नफैलियोस् भन्ने हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो । तर यो मौनतालाई प्रवासी नेपालीहरुको कमजोरी भन्ने ठानेर नै सरकार गैरजिम्मेवार बनेको छ । नेपाल सरकारले आन्तरिक तयारी गरिसकेपछि लगिहाल्छ भन्ने अझै आशा थियो । तर नेपाल सरकारले भन्ने गरेको भारत सरकारसँगको सहमतिका अधारमा भारतमा नेपालीहरुले कुनैपनि किसिमको राहत पाएका छैनन् । नेपाल सरकारकै जिम्मेवार मन्त्रीहरुका अभिव्यक्ति मुटु दुखाउने गरी ‘भावनामा डुबेर उद्दार गर्न सकिँदैन’ भन्ने गर्छन । कसैले सयुक्त राष्ट्रसंघको निर्णयलाई लिएर अभिव्यक्ति दिने गर्छन् जो एक्दमै गैरजिम्मेवारपूर्णका अभिव्यक्ति हुन्, जसको घोर भत्र्सना गर्दछौँ। यस्ता कुतर्क गरेर सरकार यस्तो महासंकटको बेला आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्ने कोसिस गर्दैछ । भारतमा रहेका नेपालीहरुलाई त जानकारी छ नि भारत आफ्ना नागरिकहरुलाई तेस्रो देशबाट ल्याइरहेको छ, त्यहाँ कुनै सम्झौता सुनिएनन् तर नेपालले मात्र यो वा त्यो भनेर बाहना बनाउँदै छ भनेर थाह पाइसकेका छन् ।
अब नेपालीहरु आफ्नो देशमा जसरी जान पाउनु पर्छ भन्ने सोच बनाएर एक्दमै जोखिमपूर्ण यात्रा जो २१०० किलोमीटर भन्दा बढी टाढाको लामो दुरिको यात्रा त्यो पनि मालवाहक ट्रकमार्फत पुरै जोखिमपूर्ण यात्रा डब्बल तिब्बर भाडा दिएर आउनेहरुको संख्या दिन प्रतिदिन हजारौंको संख्यामा आइरहेका छन जुन कुरा नेपाल सरकारलाई पनि थाह भएको हुनुपर्छ । सिमासम्म तपाईं जसरी पनि आउनुहोस यताबाट अलि अलपत्र भएको जस्तो देखाउने फेरि भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने किसिमको निर्णय एक्दमै प्रवासी नेपालीहरुको लागि घातक खतरनाक छ । त्यसैले पनि निर्णयलाई सच्याएर प्रवासमा रहेका नेपालीहरुको उद्दारका लागि भारत सरकारसँग रेल र बसको ब्यवस्थापन गराएर आफ्ना नागरिकहरुलाई भित्र्याउनु पर्छ । नत्र अवस्था एक्दमै खतरा देखिएको छ । भोकभोकै ३–४ दिनको यात्रा गरि आउने मजदुरहरु त्यसै पनि बिराम हुने छन र सिमानामा भोकभोकै अलपत्र रहने खतरा देखिएको छ । यो बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु चाहान्छु ।
र आफ्ना नागरिकहरुप्रतिी जिम्मेवार बने मात्रा राष्ट्रवादी सरकारको परिचय हुनेछ अन्यथा आफ्ना नागरिकहरु प्रतिको घातको बिल्ला रहिरहने छ र आँधिवेहरीको सामना गर्न तयार हुनुपर्नेछ ।
(लेखक : अखिल भारत नेपाली एकता मन्च केन्द्रिय समिति सदस्य एबम विद्यार्थी विभाग)